Ciyaaraha Pythian, taariikhda iyo isboortiga Delphi | Safarka Absolut
Ciyaaraha Pythian, taariikhda iyo isboortiga Delphi
Afarta ayaa ugu weynaa Ciyaaraha Panhellenic ciyaarihii hore: Ciyaaraha Olambikada ee caanka ah, Ciyaaraha Nemean ee Argos, Ciyaaraha Isthmian ee Korintos iyo Ciyaaraha Pythian taasi oo ka dhacday Sanctuary of Apollo oo ku taal Delphi. Waxaan uga doodi doonnaa tan dambe boostadeena maanta.
Magaalada Delphi waxay ku taalaa gobolka Griiga ee Phocis, oo qiyaastii 150 kiilomitir galbeed ka xigta Atenas. Ku dhowaad saddex kun oo sano ka hor, halkaas oo ay keli ahayd meel cidlo ah oo duurjoogta ah, waxaa laga dhisay meel barakaysan oo lagu sharfayo ilaaha Apollo oo sidoo kale ku yaallay mid ka mid ah erayadii ugu caansanaa ee lagu yaqaanay Giriiggii hore.
Koox wadaado ah ayaa loo yeedhay pythias Iyaga ayaa mas'uul ka ahaa ilaalinta hadalka iyo muujinta martida naqshadaha ilaahyada (ereyga "faaliye" ayaga ayaa ka yimid). Pythias waxaa loogu magac daray xusuusta bahalka Python, Mas weyn oo daganaa meesha ilaahey ku dili lahaa.
Caannimada ereygan ayaa gaadhay meeshii ugu sarraysay ee laga soo bilaabo Qarnigii XNUMXaad ee Socdaalkii Masiixiyiinta ee dhammaan Hellas oo dhan ayaa ku soo xoomay halkaas si ay ugu bixiyaan qurbaankooda codbixinta Apollo oo ay u dhegaystaan ​​aayadaha rabbaani ah Natiijada qulqulka joogtada ah ee booqdayaasha, macbadyo, taalooyin iyo dhismayaal kale oo badan ayaa la dhisay.
Burburka Macbadka Apollo ee Delphi
Intaa waxaa dheer, Delphi waxaa jiray meel astaan ​​ah oo loo yaqaan Omphalos, Xarunta adduunka " taas oo Zeus ku tilmaamtay dhagax weyn oo macmal ah.
1 Dabaaldega Ciyaaraha Pythian
1.1 Xabad joojinta xurmada leh
1.3 Tartanka gabayada iyo muusikada
1.4 Tartamada cayaaraha
2 Dhamaadka Ciyaaraha Pythian
Dabaaldega Ciyaaraha Pythian
In 590 BC Ciyaaraha Pythic ayaa la qabtay markii ugu horeysay, taas oo lahaa a sideed-sanadood (Si ka duwan ciyaarihii Olombikada, oo la qaban jiray afartii marba mar). Kuwa u xilsaaran abaabulkooda waxay ahaayeen wadaaddo loo yeeray madadaalo, oo ka imanaya magaalooyin kala duwan oo Giriig ah.
Halyeeygu wuxuu leeyahay in cayaaraha uu aasaasay Apollo laftiisa waxyar uun markuu dilo Python. Khuraafaadku wuxuu la xiriiraa sida ilaah uu u qabsaday Delphi isaga oo ubax laal madaxiisa ah. Sababtaas awgeed, ku guuleystayaasha Ciyaaraha Pythic waxaa lagu abaalmariyey ubax caws, haro markii dambe looga dayday xaflado kale iyo tartamo maamuus ah.
Xabad joojinta xurmada leh
Sidii ay ahayd Ciyaaraha Olombikada, bilooyinkii ka horreeyay bilowga Ciyaaraha Pythic dhowr wargeysyada loo yaqaan aragtiyaha waxay ku soo wareegeen Griiga si ay ugu dhawaaqaan taariikhda ay bilaabmayso.
Ujeeddada ergooyinkan ayaa ah in baaqani gaadhayo meel kasta. Magaalada ogolaatay inay kaqeyb gasho ciyaaraha waa inay si deg deg ah u joojisaa dhaq dhaqaaq kasta oo dagaal oo ay soo gudbisaa wicitaanka Xabad joojinta xurmada leh. Magaalooyin diiday inay sidaa sameeyaan waa laga reebay, taas oo lumisay sharaf weyn.
Maalmihii hore ee Ciyaaraha Pythian waxaa loogu talagalay xafladaha xurmada leh ee lagu maamuusayo Apollo. Waxaa jiray weynaa allabaryo (hecatombs), socodsiinta y xafladaha.
Waxaa sidoo kale jiray riwaayad riwaayad ah oo lagu xasuusto dagaalkii halista ahaa ee ilaahay ee ka dhanka ahaa abeesadii foosha xumayd ee Python. Inuu martigaliyo bandhigan caanka ah Tiyaatarka Delphi, mid ka mid ah tiyaatarada Greek sifiican u ilaashan
Tartanka gabayada iyo muusikada
Ka dib xafladihii furitaanka, Ciyaaraha Pythian waxay ku bilaabmeen taxane ah tartamada muusikada taas oo kaqeybgalayaashu ay ku muujiyeen xirfadahooda ku ciyaarida aaladaha ay ka mid yihiin zither. Iyada oo la adeegsanayo xilliga, tiyaatarka, koox-kooxeedyada iyo tartamada qoob-ka-ciyaarka. Muddadii dambe waxaa sidoo kale jiray tartamo gabayo ah.
Kadib maalmihii loogu tala galay fanka, tartamada isboorti ayaa bilaabmay. Caddaynta ugu caansan waxay ahayd tartanka garoonka (qiyaastii 178 mitir), ee laba marxaladood, ka tartan dheer oo ka mid ah 24 garoon iyo tartanka hubka, oo ay orodyahanadu ku tartamayeen iyagoo ku hubaysan gogol xaarka; tartamo ayaa sidoo kale la qabtay bood dheer, discus iyo waran tuur, iyo sidoo kale tijaabooyin kaladuwan oo lagdinta sida kan ah daboolid. Waxaa jiray seddex qaybood iyadoo loo eegayo da'da tartamayaasha.
Maalmihii ugu dambeeyay ee Ciyaaraha Pythian ayaa loo qoondeeyay tartamada fardaha. Waxay ahaayeen laba qaybood: tartamada gaadhifaraska leh laba faras (dogob) iyo afar fardood (gaadhifaras). Tartamadaan waxaa lagu qabtay ewuxuu ku tartamayaa magaalada deriska la ah ee Cirra, dhowr kiilomitir u jirta Delphi. Si kastaba ha noqotee, meesha quduuska ah taallada caanka ah ee Charioteer of Delphi, maanta ayaa lagu xafiday matxafka qadiimiga ah ee magaalada. Sawir gacmeedkan naxaasta ah ayaa matalay Booliska Gela, oo ah daalim Giriigga Sicily ah oo isagu ku dhawaaqay inuu guuleysto cayaaraha marar badan.
Dhamaadka Ciyaaraha Pythian
Caan ka ahaanshaha Ciyaaraha Pythian-ka ayaa sii socday xitaa kadib qabsashadii Roomaanku ee Griiga, in kastoo ay bilaabeen gaabis muddada dib u dhaca. Oracle wuxuu sii waday soo dhaweynta martida ciyaaruhuna way sii socdeen in la qabto, laakiin caannimadiisa iyo haybadiisa ayaa si tartiib tartiib ah u yaraatay.
Hantida lagu xareeyay macbudyada ku yaal Delphi waxaa la bililiqeystey qarnigii XNUMXaad ee AD Goths iyo Heruli. Ugu dambeyntiina, ciyaaruhu waxay joojiyeen in la xuso qarnigii xigay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Ciyaaraha Pythian, taariikhda iyo isboortiga Delphi
Cunto karinta Puto, mid ka mid ah waxyaabaha ugu macaan ee Filipino
5 dhismayaasha ugu caansan Mareykanka